Ụbọchị My Pet » Lezie anya nke Ịghọ a Ọkachamara Online Dater
emelitere ikpeazụ: Jul. 04 2020 | 3 min agụ
Kwa afọ, ọtụtụ narị puku ndị na-achọta ha 'zuru okè egwuregwu’ site online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ. Na kwa afọ, ọtụtụ narị puku ndị ọzọ na-nkụda mmụọ site n'ahụmahụ ha. Otu n'ime ihe ndị so akpata ndị nwere nsogbu na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ ntoputa nke 'ọkachamara online dater', a okwu chepụtara site Online dịwara Magazine na-akọwa onye na-eme ihe dị oké njọ banyere ịchọta onye, ma na-enweghị nzube nke ewere ihe ọ bụla ụbọchị ma ọ bụ mmekọrịta 'kwa kpọrọ’ n'ihi na nke ọzọ egwuregwu 'nwere ike ịbụ mma.’
A ọkachamara online dater na-emekarị nwere atọ ma ọ bụ karịa n'ime ihe ndị na-esonụ àgwà:
> Ekwurịta okwu na karịa mmadụ isii n'otu oge.
> Member nke atọ ma ọ bụ karịa online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ n'otu oge.
> Relists profaịlụ n'ime 24 awa a mmekọrịta gbasaa.
> Na-ahapụ ọtụtụ nkwukọrịta dị nnọọ 'kwụsị’ iji na-etinye oge n'ime ọhụrụ nkwukọrịta.
> Achọpụtazi ozi na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ ọtụtụ ugboro n'ụbọchị.
> Always na-ekwere na-esote egwuregwu 'ike ịbụ ka mma'.
> Ọtụtụ ugboro a afọ ga-enwe ihe karịrị otu ụbọchị, na ndị dị iche iche, melite ke otu izu.
> Ke akpa ịrịba ama nke nsogbu na a nwere mmekọrịta, ahapụ ihe ịkwụsị laghachi online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị.
> Ka zoo profaịlụ, ma ọ dịghị ihichapụ ya, mgbe nwayọọ nwayọọ na-akpa otu onye.
> Mgbe laghachiri si a ụbọchị, ozugbo achọpụtazi mail maka ọhụrụ ozi site na ndị ọzọ.
N'ozuzu, a mmadụ anaghị consciously-ekwu na 'm chọrọ ịghọ a ọkachamara online dater’ mgbe ahụ na-achụso ya dị ka a ndụ mgbaru ọsọ. Ọ bụ ihe na-amalite dị ka a n'ihi nke onye ahụ na-online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ahụmahụ. Ọ / ọ na-ahụ otú 'mfe’ ọ dị na a ọhụrụ ụbọchị na na ẹkenam ihu ọhụrụ fọrọ nke nta kwa ụbọchị. Tupu onye maara na ọ, ọ / ọ bụ na-ekwurịta okwu na ọkara a iri na abuo (ma ọ bụ karịa) ndị mmadụ n'otu oge ahụ. Mgbe a na ụbọchị bụ ndokwa otu onye ka nwere ndị na isii atụmanya na-eche na n'ihe ndị onye Igbe mbata mgbe ọ / ọ laghachi site na ụbọchị. Nke a na-, n'oge ya, amalite ịzụlite a subconscious echiche na-esote onye na nwere ike ịbụ 'mma,’ Ya mere, ọ dị mfe na-ahapụ a mmekọrịta ma ọ bụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ahụmahụ na mbụ ihe ịrịba ama nke nsogbu kama na-arụ ọrụ site nsogbu ndị.
A ọkachamara online dater ga-n'ozuzu zoo a profaịlụ vesos ihichapụ ya mgbe abanye n'ime nanị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị mmekọrịta. Subconsciously, onye na-adịghị n'ezie-enye ya ma ọ bụ ya 100% ka mmekọrịta n'ihi na ha formulated mfe ụzọ mgbapụ ụzọ azụ ka planet nke ụbọchị.
Ọrụ online daters, n'amaghịkwa na ọ, na-enwe mmetụta ọjọọ n'ahụ na ndị ha na-abịa na kọntaktị na ha n'oge ha expeditions. Ọmụmaatụ, a ọkachamara online dater nwere ike na-ede asaa ndị na n'otu oge ahụ, mgbe ọzọ ọhụrụ na-akpali olileanya na-egosi. N'oge ya, ndị ọkachamara online dater na-enye ohere nkwurịta okwu na onye (ma ọ bụ karịa) nke ọzọ asaa ndị mmadụ na mberede kwụsị, na-ahapụ na onye na-enweghị azịza ma na-eche, 'Olee ebe ọ / ọ na-apụ n'anya ka?’ Ndị ọzọ nsogbu ọkachamara online daters mee ka online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ na ha enweghị ezi nkwa. Ha pụrụ inwe atọ, anọ ma ọ bụ ọbụna ihe mmekọrịta a afọ. The mmekọrịta bụ n'ozuzu adịteghị na ndị ọrụ online dater ka a ọhụrụ ụbọchị agbakọta (na onye ọhụrụ ọ / ọ zutere online) n'ime ọtụtụ ụbọchị nke a gbasaa.
A onye nwere atọ ma ọ bụ karịa àgwà nke a ọkachamara online dater anaghị achọ na-ekweta na ọ / ọ bụ a ọkachamara online dater, ma ime otú ahụ bụ nzọụkwụ mbụ na-n'idozi nsogbu. Nzọụkwụ ndị ọzọ iji n'idozi nsogbu ndị:
> Zuru ihichapụ profaịlụ gị(s) na-abanye n'ime a mmekọrịta. E nweghị achọ azụ, nanị na-atụ.
> Onwe gị ka mmekọrịta gị na a mkpebi siri ike na-arụ ọrụ site na nsogbu. Na-arụ ọrụ site okwu na a mmekọrịta bụ ihe na-enyere ndị mmadụ na-eto eto. Ọsọ abụghị ihe ngwọta.
> Ọ bụrụ na ị na-akwụsị na-ekwurịta okwu na onye, adịghị eme ya oyi toki. Dịkarịa ala zipu onye a nsọpụrụ dee nke mere na ọ / ọ maara ihe mere. Onye ahụ ga-akwanyere gị ùgwù ọzọ maka nke a.
> Chọta otu online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ na-amasị gị na-arapara n'ahụ ya. Nke a abụghị a egwuregwu ịhụ otú ọtụtụ ndị ọhụrụ na ndị mmadụ na ị nwere ike ikwurịta okwu. Onye ọ bụla ị na-ekwurịta okwu na bụ ezigbo onye na-ezigbo obi. Unu na-edu ha na.
> Naanị-ekwurịta okwu na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị mmadụ n'oge a.
> Unu ada n'ime echiche nke 'na-esote onye pụrụ ịbụ mma.’ Kama, -elekwasị anya na onye ị na-na na na-mara na ha bụ 'onye kasị'. Mgbe ahụ mee ka ọ na-arụ ọrụ.
Ọrụ online daters n'amaghị ama merụrụ ọtụtụ ndị n'oge ha 'njem'. Ma eleghị anya, ihe ka njọ bụ na ọkachamara online daters merụrụ onwe ha n'ihi na ha mgbe ịmụta na-arụ ọrụ site mmekọrịta mbipụta ndị na-amị ogologo-okwu mmekọrịta ịga nke ọma. Luckily, na mkpebi siri ike, ọkachamara online daters nwere ike ịgbanwe ma mgbe ha na-etinye otu ufiop-elekwasị anya na a mmekọrịta (dị ka ha mere na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị) mgbe ahụ mmekọrịta n'ozuzu amama n'ime ihe dị ịtụnanya na ogologo na-adịgide adịgide ahụmahụ. Na nke na-arụpụta ọzọ ịga nke ọma akụkọ si mmadụ abụọ, bụ onye zutere online.